IATA ibhengeza izithethi zeNgqungquthela yeHlabathi yoThutho loMoya eBoston
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zeShishini lokuhlangana » IATA ibhengeza izithethi zeNgqungquthela yeHlabathi yoThutho loMoya eBoston
Airlines • isikhululo • Iindaba zeManyano • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Education • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iintlanganiso • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Technology • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo
I-WATS iza kudlala iiseshoni kwikamva lomthwalo womoya kulandela ukusebenza kwawo ngobuqhawe ngexesha lentlekele, ukuqala ngokutsha ngokunxibeleleneyo nonxibelelwano lwehlabathi, kunye nothotho lweengxoxo zomlilo ezizisa ii-CEO zeenqwelo moya kunye neqela elahlukileyo labachaphazelekayo kushishino kubandakanya nabanikezeli beziseko zophuhliso, abavelisi bezixhobo zokuqala kunye nabanye abathengisi.
Umbutho wezoThutho loMoya waMazwe ngaMazwe ubhengeze inkqubo kunye nezithethi zeNgqungquthela yeHlabathi yezoThutho loMoya (i-WATS).
Ingqungquthela yezoThutho loMoya yeHlabathi (i-WATS) iza kubanjwa ngokudibeneyo ne-IATA yoNyaka kaWonke-wonke (i-AGM) eBoston, e-USA, nge-3-5 ka-Okthobha.
Izihloko zeseshoni zibandakanya ukujongana nomceli mngeni wotshintsho lwemozulu, ukunxibelelana ngokukhuselekileyo nehlabathi ngexesha le-COVID-19, iyantlukwano kunye nokubandakanywa kubuchwephesha, ukusebenzisana nabalingani beetyathanga zexabiso, kunye nomthwalo womoya.
Umbutho wezoThutho loMoya weHlabathi (i-IATA) ubhengeze inkqubo kunye nezithethi zeNgqungquthela yeHlabathi yoThutho loMoya (i-WATS), ebanjwe ngokudibeneyo ne Intlanganiso kaWonke-wonke yoNyaka ye-IATA (AGM) eBoston, e-USA, nge-3-5 ngo-Okthobha.
Ndonwabe kakhulu kukuba iNgqungquthela yeHlabathi yoThutho loMoya iza kuphinda iqhubeke njengomsitho ophilayo okokuqala ukusukela ngoJuni ka-2019. Njengokuba siceba ukubuyela kwishishini kwi-COVID-19 kwaye siqwalasele imiba ebalulekileyo yokutshintsha kwemozulu, iingxoxo phakathi kwabantu kunye neengxoxo-mpikiswano phakathi kweenkokheli eziphezulu zolu shishino kunye nabachaphazelekayo ziya kubaluleka kakhulu, utshilo uWillie Walsh, IATAUMlawuli-Jikelele.
Izihloko zeseshoni zibandakanya ukujongana nomceli mngeni wotshintsho lwemozulu, ukunxibelelana ngokukhuselekileyo nehlabathi ngexesha le-COVID-19, iyantlukwano kunye nokubandakanywa kubuchwephesha, ukusebenzisana nabalingani beetyathanga zexabiso, kunye nomthwalo womoya. I-CEO edumileyo ye-Insight Debate iya kubuya, imodareyithwe ngu-Richard Quest we-CNN, i-anchor ye-Quest Means Business.
Impendulo yokuhamba ngenqwelomoya kutshintsho lwemozulu iya kuba phezulu kwi-ajenda. Intetho ephambili iya kwenziwa nguRachel Kyte, uMlawuli weSikolo iFletcher, iYunivesithi yaseTufts nowayesakuba ngummeli okhethekileyo UN UNobhala-Jikelele kunye neGosa eliyiNtloko lesiGqeba laMandla aZinzileyo aMntu Wonke. U-Kyte ngaphambili wayelisekela-mongameli weQela leBhanki yeHlabathi kunye nomthunywa okhethekileyo wotshintsho lwemozulu, ekhokelela ekuqhubekeni kwesiVumelwano saseParis.
Oku kuya kulandelwa liqela labachaphazelekayo ababalulekileyo abajolise kuzinzo kubandakanya:
UGuillaume Faury, iGosa eliyiNtloko lesiGqeba, iAirbus
UStanley Deal, iGosa eliLawulayo eliyiNtloko, iiNqwelo moya zoRhwebo zeBoeing
U-Annie Petsonk, USekela-Nobhala OyiNtloko woSekela Nobhala wezoPhapho neMicimbi yaMazwe ngaMazwe, iSebe lezoThutho laseMelika
UPieter Elbers, iGosa eliyiNtloko lesiGqeba, i-KLM
UGqirha Jennifer Holmgren, u-CEO, uLanzaTech